Cabdullaahi Yuusuf oo Laga Sugayo 24 saacadood Gudahood in uu ku Jawaabo...
Baarlamaanka DFKMG ayaa kulan ay Janaayo 13keedii ku yeesheen Baydhabo waxay xukunka dalka oo dhan gacanta u geliyeen Madaxweynaha DFKMG, Cabdullaahi Yuusuf Axmed, waxaana baarlamaanku ansixiyeen in muddo 3-bilood ah uu dalka ku hoggaamiyo xukun deg-deg ah ama "Martial Law".
Sidaas daraadeed Janaayo 14, 2007 waxay ahayd maalintii koowaad ee dalka aysan ka jirin baarlamaan, ra'iisul wasaare iyo hay'ad sharci dejineed oo shaqayneysa, waxa kaliya oo shaqaynayaa waa xukunka uu bixiyo madaxweynuhu ilaa ay dhammaaneyso saddexdaas biloodna baarlamaan fariisan kara iyo xafiis ra'iisul wasaare oo shaqayn karaana ma jiri karaan, sida uu qabo xeerka "Martial Law" ee baarlamaanku ay gacantooda ku ansixiyeen.
Baarlamaanka oo dhan iyaga ayaa is casiley muddo saddex bilood ah markii ay ansixiyeen "Martial Law". Dalkuna muddadaas waxa uu gacanta ugu jiraa militariga oo uu hoggaamiyo madaxweynuhu.
Baarlamaanku waxa uu ka mid yihiin shacabka oo ay metelaan. Mar haddii la soo rogay "Martial Law" ma jiri karo baarlamaan shacab oo hawl geli kara oo sharci dejin kara. Sidaas daraadeed sharci ahaan, xeer ahaan iyo farsamo ahaan toona suurtagal kuma aha in ay baarlamaanku shir isugu yimaadaan. Sida kor ku xusan, amarka oo dhan inta ay xaaladda degdega ahi jirto waxaa gacanta ku haynaya madaxweynaha dalka.
Mar haddii aan qeexnay waxa uu yahay "Martial Law", oo ay soo hoos geleyso in aan barlamaanku kulan yeelan karin muddo 3 bilood ah, waxaa halkaas ka soo baxaya in kulankii baarlamaanka DFKMG ee la qabtay Arbaca Janaayo 17, 2007, oo ah muddo aad uga yar saddex bilood, in uu ahaa kulan aan waxba ka jirin, sharci ahaan iyo farasamo ahaana uusan ku qabsoomi karin, maadaama baarlamaanku uu metelo shacabka, shacabkana uu saaran yahay "Martial Law". Sidaas daraadeedna mar haddii marka horeba uu kulankaasi sharci darro ahaa in uusan awood baarlamaanku u lahayn in uu codeeyo, ama uu cid xil ka qaado.
Halkaas waxaa ka soo baxay in aysan waxba ka jirin xil ka qaadistii ay baarlamaanku ku sameeyeen Shariif Xasan Sheekh Aaden, sidaas daraadeedna uu ilaa hadda yahay guddoomiha Baarlamaanka Soomaalida loogu soo dhisay dalka Kenya, waxaana Shariif Xasan laga sugayaa marka ay saddexda bilood dhammaato in uu baarlamaanka isugu yeero oo hawshii loo xilsaaray uu halkaas ka sii wato, sida uu sheegay Axmed Naasir Macallin oo ah Garyaqaan reer Kenya ah.
Tan kale madaxweynaha DFKMG, Cabdullaahi Yuusuf Axmed, waxaa la gudboon in sida ugu dhaqsaha badan uu shacabka /saxaafadda uu muddo 24 saacadood gudohoos ah uu caddeeyo in kulankii shalay ee baarlamaanka DFKMG uu ahaa kulan aan waxba ka jirin.
Haddii uu sidaas yeelo, waxay dadka isaga taabacsan u cadayn doontaa in uu madaxweyne ka yahay dalka Soomaaliya. Haddiise uusan ka hadlin oo uu aqbalo ficilka sharci darrada ah ee baarlmaanka DFKMG waxa uu ku sifoobayaa sida u muuqada inta badan Soomaalida oo ah in dalka Soomaaliya uu gacanta ugu jiro Xabashi iyo in Cali Maxamed Geeddi uu Zenawi halkaas uga yahay wakiil ama governor. Markaas haddii Cabdullaahi Yuusuf uusan tixgelin siinin sharciga Martial Law ee loo dhiibey, ha ogaado isaga ayaa lagu xejin doonaa xil ka qaadista ee ha ku sugo Villa Soomaaliya marka inta baarlamaanka la shiriyo oo dhawr xildhibaan oo Cali Maxamed Geeddi taabacsan lagu shiriyo Baydhabo markaas lagu dhawaaqo madaxweynihii ayaa xilkii laga qaaday.
Hadda dhegaha shacabka Soomaaliyeed waxay sugayaan hadalka Cabdullaahi Yuusuf ilaa 24 saacadood (ugu badnaana 48 saacadood), haddiise ay maqli waayaan waxaa shacabka la gudboon in ay qaylo dhaan u dirsadaan Qaramada Midoobey sidii dalkaas xornimadiisa loogu soo celin lahaa.
Haddii aan dib ugu laabano Baarlamaanak DFKMG, waxay shaqadii loo soo dhisay ahayd DIB-U-HESHIISIIN (waa xilliga aan dalku ku jirin "Martial Law"). Dib u heshiinta micneheedu waa: in dib la isugu soo celiyo dadkii Soomaaliyeed, arrintaas waxaa ka mid ah in dadka kala fikradaha duwan la isu keeno, la dhegeysto qof kasta fikradiisa. Taas oo jirta ayaa waxaa cajaa'ib noqotay in qofkii fikrad ka duwan keena la yiraahdo waa ku casileynaa?...
Balse doodaasi waxay imaan kartaa marka ay dhammaadaan 3-da bilood ee xaaladda degdega ah, mudaddaas oo aan baarlamaanku shaqayn doonin, xafiiska ra'iisul wasaaruhuna shaqayn doonin. Inta ka horsa waxaa la sugayaa jawaabta Cabdullaahi Yuusuf.
Waxa sharcigu ka qabo xil ka qaadistii iyo Martial Law uu ka yiri Garayaqaan Axmed Naasir Macallin iyo hadalkii uu Shariif Xasan ka yiri xil ka qaadistii Halkan ka dhegeyso. (British Broadcasting Corporation). Jan 17, 2007
Faalladii: SomaliTalk.com | Jan 18, 2007
Jan 17, 2007: Dublomaasi sare oo Maraykan ah ayaa cambaareeyey cod bixintii baarlamanka Kumeelgaarka ah ee Soomaaliya uu xilka uga qaaday guddoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan Sheikh Aaden. Caawiyaha xoghayaha Arrimaha dibada ee Maraykanka u qaabilsan arimaha afrika, Jendayi Frazer, waxay tiri arrintani waxay dhaawac ku tahay isku dayga in si nabad gelyo ah lagu xalliyo kala tafaraaruqa dalka dagaalku halakeeyey. Sidaas waxaa warka ku bilaabay Raadiyaha Maraykanka ee VOA.
Wararkii kale ee maanta Akhri.... 18/1